Lionel Messi oo ka sare maray Xavi Hernandez rikoor cusubna ka dhigay horyaalka La Ligaha Spain – Gool FM
(Barcelona) 20 Luulyo 2020. Lionel Messi ayaa isku qoray buugga taariikhda horyaalka La Liga kaddib markii uu gool caawin waali ah ka sameeyey kal ciyaareedkan horyaalka Spain.
Kabtanka Barcelona ayaa noqday ciyaaryahanka dhigay rikoorka caawinta horyaalka La Liga ee laacibka ugu caawinta badan horyaalka hal xilli ciyaareed.
Xiddiga xulka qaranka Argentine ayaa loo diiwaan geliyey 21 caawin oo horyaalka ah kal ciyaareedkan kulankii ay xalay ka adkaadeen Alaves, taasoo rikoor ka noqotay ciyaaraha sare ee horyaalka Spain, waxaana uu ka sare maray Xavi.
Xavi Hernandez ayaa rikoorkan horay u haystay, kaasoo 20 caawin u sameeyey kooxda Barcelona horyaalka intii lagu guda jiray kal ciyaareedkii 2008/09.
21 caawin ayuu ka dambeeyey horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan, sidoo kalena Messi ayaa 25 gool ka dhaliyay La Liga Santander taasoo uu runtii ku kasbaday inuu ku qaato abaal-marinta Pichichi Trophy.
Karim Benzema oo kaalinta labaad ka galay Pichichi Trophy ayaa afar gool ka dambeeyey Messi, waxaana uu horyaalka ka dhaliyey 21 gool kal ciyaareedkan, laakiin waxa uu ku guuldarreystay inuu hal gool xitaa ka dhaliyo kulankii ay ka horjeedeen xalay naadiga Leganes.
Si kastaba ha noqotee, Messi ayaa sidaas ku ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan iyo kan ugu caawinta badan horyaalka La Liga kal ciyareedkan.